ဘယ်လောက်လှုပ်လှုပ် ပုံစံမပျက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ထိပ်တိလေးကတော့ Lisa လေးရဲ့ အထူးအမှတ်အသားလေးလို့တောင်တင်စားကြပါတယ်။ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်လေး Lisa လေးရဲ့ bangs ပုံစံကို ကြိုက်လွန်းလို့ လိုက်ပြီးညှပ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်ဖူးကြမှာပါပဲ။
ဒီလိုတမူထူးခြား‌နေတဲ့ ထိပ်ဆံပင်တိုလေးက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ထင်မိပါသလဲ? ပထမဆုံးအကြိမ် Bang ညှပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Lisa ဟာ Rolling Stone နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
Lisa ဟာ bangs ကို မထားချင်ခဲ့တဲ့သူလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့မိခင်ကြောင့် ဆံပင်ညှပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ နဖူးပြောင်ပြောင်လေးကို ချစ်လွန်းလို့ Lisa ဟာ ဆံပင်မကျအောင်ထားချင်ပေမဲ့ အမေရဲ့အကြံပြုချက်ကြောင့် ညှပ်ဖြစ်သွားပုံကို အခုလိုလေး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“အဲ့တာ အမေ့ရဲ့အကြံပေါ့။ ကျောင်းမတက်ခင်တုန်းက အမေကလေ ‘Hey Lisa… ထိပ်ဆံပင်သွားညှပ်ရအောင်’ ဆိုပြီး ပြောတာပေါ့။ အဲ့တုန်းက ‘ထိပ်ကိုတိပစ်မယ်? ဟင့်အင်း! သမီးနဖူးလေးကို သိပ်ချင်တာ.. အဲ့တာကြောင့် ဆံပင်တွေနဲ့ ဖုံးမပစ်ချင်ပါဘူး’ ဆိုပြီး ပြောသေးတယ်။
အဲ့လိုပြောတော့ အမေက ‘Nah, သမီးရဲ့နဖူးကလေ… သိလား… အဲ့လောက်ကြီးမလှပါဘူးကွယ်။ အဲ့တော့ ထိပ်လေးကိုညှပ်လိုက်ပြီး ဆံပင်လေးချလိုက်ရအောင်နော်’ လို့ အမေက မြူဆွယ်ကော။ အဲ့တာနဲ့ Bang ကို ထားဖြစ်သွားတာပါပဲ” ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းအောင် သူမရဲ့ဆံပင်ရာဇဝင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။
တကယ်က Lisa ရဲ့ နဖူးလေးက ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Lisa ရဲ့ မေမေက သူ့သမီးလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်အောင် ထိပ်ဆံပင်လေးကို ညှပ်စေချင်ခဲ့တာပါ။ နဖူးပြောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ဆံပင်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Lisa ကတော့ ချစ်စရာကောင်းနေမှာပါပဲ။ LILI လေးကတော့ ပုံစံ (၂) မျိုးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အသည်းယားစေတာ အကြိမ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Next Anniversary လုပ်ရင်း လက်ထပ်တော့မယ့်အကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်တဲ့ MarKim စုံတွဲ »
Previous « ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ ​နောက်ဆုံး ၃ လမှာ ထွက်ရှိသွားမယ့် သိပ္ပံနဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုအမျိုးအစား K-movie (၄) ခု